Britain oo u Ololaynaysa in Maxkamar Gaar ah Lagula Xisaabtamo Millatariga Waddanka Myanmar. – somalilandtoday.com
Britain oo u Ololaynaysa in Maxkamar Gaar ah Lagula Xisaabtamo Millatariga Waddanka Myanmar.
(SLT-London)-BBC-da ayaa ogaatay in wasiirka arrimaha dibadda Britain, Jeremy Hunt, uu ka fikirayo qorshe ah in la sameeyo maxkamad gaar ah oo caddaaladda hor keenta hoggaamiyeyaasha milatariga dalka Myanmar.
Qaramada Midoobey ayaa ku eedeysay janaraallo ka tirsan milatariga Myanmar in ay xasuuq u geysteen dadyowga muslimiinta ahi ee qowmiyadda Rohinja ee laga tirada badan yahay.
Wasiirka arrimaha dibadda Britain, Jeremy Hunt, ayaa hadda ka soo laabtay safar uu ku tagay dalkaasi Myanmar.
Jeremy Hunt ayaa sheegaya in milatariga Myanmar ay tahay in lagula xisaabtamo waxa Qaramada Midoobey ay ku tilmaantay xasuuq ka dhan ah qowmiyadda Rohija ee laga tirada badan yahay.
Warbixin bishii hore ay soo saartay Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in ciidamada dalkaasi Myanmar ay geysteen kufsi, dil iyo burburin tuulooyin ay deggan yihiin dadka Rohinjaha. Waxaa sidoo kale milatariga lagu eedeeyay in ay si khasab ah guryahooda uga qaxiyeen dad aad u badan oo rayid ah.
Wasiirka arrimaha dibadda Britain ayaa hadda doonaya in Qaramada Midoobey ay dacwadda gabood falladani u gudbiso maxkamadda caalamiga ee dambiyad adagaalka.
Balse cabsida uu qaba ayaa ah in Shiina uu arrintaasi ku diidi doonto codka diidmada qayaxan, marka arrintaasi la hor geeyo golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey, taa badalkeedana uu ka fikirayo in la helo qaab kale oo lagula xisaabtamo hoggaamiyeyaasha milatariga ee Burma.
Waxa uu sheegay in arrinta uugu dhow ay tahay in la sameeyo maxkamad gaar oo qaadda dacwadda hoggaamiyeyaashani milatariga sida maxkamadihii gaarka ahaa ee Qaramada Midoobey ay u xil saartay dambiyadii dagaal ee ka dhacay waddamada Yugoslavia iyo Rwanda.
Balse sidoo kale arrintan ayaa u baahan doonta caalamku uu ku heshiiyo, arrintaa oo Hunt uu doonayo in uu u ololeeyo marka usbuuca dambe uu New York ka furmo shirka golaha loo dhanyahay ee Qaramada Midoobey